-ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ Archives - Xinhua News Agency
All posts tagged "-ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ"
၂၀၁၈ – ၁၉ ပထမ ခြောက်လ ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ ဒေါ်လာ တစ်ဘီလျံကျော်လျော့ကျ
နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၄ ရက်(ဆင်ဟွာ) ၂၀၁၈ – ၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမ ခြောက်လတွင် ကုန်သွယ်မှုလိုငွေမှာ ယမန်နှစ် အလားတူ ကာလထက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၁၅ ဒသမ ၃ သန်းလျော့ကျခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ် တော် ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်း ကော်မတီ၏...
၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာရေး ရသုံး မှန်းခြေတွင် ကျပ် ၂ .၇၄ ထရီလီယံ လိုငွေပြ
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ) ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာရေး ရသုံးမှန်းခြေ တွင် စုစုပေါင်း ရငွေမှာ ကျပ် ၁ဝ.၃၇ ထရီလီယံ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း အသုံးစရိတ်မှာ ကျပ် ၁၃ . ၁၁ ထရီလီယံသုံးစွဲ ခဲ့သဖြင့် လိုငွေပြမှုမှာ...
၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမခုနှစ်လ အတွင်း ကုန်သွယ်မှုလိုငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂,၁၉၂ . ၆၅၉ သန်းပြ
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ) ၂၀၁၅ -၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၂၃-၁၀-၂၀၁၅ ထိ ပထမ ခုနှစ်လ အတွင်း ပို့ကုန် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆,၇၀၅ သန်း၊ သွင်းကုန်တင်သွင်း နိုင်မှု အခြေအနေ အမေရိကန်...
Culture & Entertainment1 min ago